Raaxada la heli karo marka ninka naagta ku kor fariisato | Gaaloos.com
Home » galmada » Raaxada la heli karo marka ninka naagta ku kor fariisato
Maanta waxaan ka hadlaynaa qaab ka mid ah qaababka galmada ugu macaan badan qaabkaan inta badan wuxuu sameeyaa ninka marka uu daalan yahay oo uuna rabin inuu aad isu dhaqdhaqaajiyo, hogaanka waxaa qabanaysa gabadha.
Marka ay istiinkooda dhamaystaan ninka wuxuu u seexnayaa dhabardhabar naagtana waxay ku fariisanaysaa bahalkiisa oo taagan kuma ficna qaabkan naagaha buurbuuran waayo sida la rabay uma dhaqdhaqaaqi karto .
Qaabkan labo nooc ayuu u qaybsamayaa qaybta koowaada naagta bahalka ayay ku fariisanaysaa wejigeedana wuxuu ku aaddan yahay xagga ninka wejigiisa marka ay ruxdda ku jirto ninkana wuxuu ku baashaalayaa naasaheeda haddii ay leedahay naaso weyn inta ay is soo qalloociso ayuu afka gashanayaa inbta naaskeeda aad bay u dareemaysaa raaxo aan la soo koobi karin.
Qaybta labaad marka ay ku fariisato waxay u jeedsanaysaa xagga lugihiisa dhabarkeedana xaggiisa ayuu soo marayaa, markan wuxuu u salaaxayaa badhiyaha aad bay u raaxaysanaysaa isagana wuxuu ku raaxaysanayaa bahalkiisa galaya ka soobaya isagoo u jeedo labada bari oo raxanayo dhaqdhaqaaqa futada kacsi awgii.
Title: Raaxada la heli karo marka ninka naagta ku kor fariisato